Uyiphatha njani i-iTunes i-backups | IPhone iindaba
Uyiphatha njani i-iTunes backups
Ngaba uyibuyisile i-iPhone yakho okanye i-iPad ngaphandle kokuqonda ukuba uneefoto ezibalulekileyo, okanye incoko kaWhatsApp ongafuniyo ukuyilahla? Yinto eyenzekileyo kuthi sonke ngamanye amaxesha. Ngethemba, konke kungalahleki, njengoko inkqubo yogcino iOS kunye ne-iTunes isebenza kakuhle. Sele sichazile indlela yokulawula i-backups ze-iCloud ze-iPad yethu. Inketho ekhululekile kwaye izenzekelayo, kodwa inesiphene esikhulu, oko kukuthi ukhuphelo olunokufunyanwa kuphela ngokubuyisela isixhobo, esikhawulezayo. I-iTunes isinika ithuba lokudala iikopi ezikhuselayo, ekufuneka sizivumelanise nayo, ekulungeleyo ukuba sithathela ingqalelo ukuba iyasivumela ukuba siyenze ngaphandle kwayo nayiphi na intambo, inxibelelaniswe kwi-WiFi efanayo. Zeziphi iingenelo koku? Ewe, kuqala, zigcinwa kwikhompyuter yakho, ukuze ke wenze ikopi yokuncedisa kwenye indawo. Kwaye eyona nto intle kukuba unokuyifumana nanini na, awudingi ukubuyisela isixhobo. Zenziwa njani iikopi? Sichaza inyathelo ngenyathelo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuxelela iTunes ukuba inyamekele iikopi, esiza kuthi nqakraza ngaphakathi kuzo Iikopi eziGcinayo kukhetho «Le khompyuter». Nje ukuba yenziwe, iTunes iya kukukhathalela ukwenza ikopi xa uvumelanisa isixhobo sakho. Unokwenza ikopi nangaliphi na ixesha ngokunqakraza kwiqhosha "Yenza ikopi ngoku"..
Xa ufuna ukubuyisela ikopi, cofa kwindawo ethi "Buyisela ikopi", kwaye iwindow iya kuvela kunye nekopi onokuyibuyisela. Akunyanzelekanga ukuba ivele kwisixhobo esinye, ikuvumela ukuba ufumane iikopi kwezinye izixhobo, nkqu nakwi-iOS eyahlukileyo, kodwa ayisiyonto ingena bug ukuba uyenza ngoluhlobo. Okwabo kukuba isixhobo ngasinye sinekopi yaso.
Khetha ikopi ofuna ukuyifumana kwaye ucofe ekubuyiseleni. Kuxhomekeke kubungakanani bayo, inkqubo inokuthatha ixesha elingaphezulu okanye elincinci. Ekugqibeleni, uya kuba nefowuni yakho njengoko kwakunjalo ngexesha lokugcinwa kwemali.
Ukusuka kwimenyu yokukhetha ye-iTunes ungabona iikopi onazo, kwaye ucime ezo ungasafuni kuzisebenzisa. ¿Apho ii-backups zikhona? Kwi-Mac kufuneka uye kwindlela «Abasebenzisi> (umsebenzisi wakho)> Ithala lencwadi> Inkxaso yesicelo> ImfonoSync> i-Backups» nakwiWindows «C: Abasebenzisi (umsebenzisi wakho) AppDataRoamingApple ComputerMobileSyncBackups». Ungafikelela kwezi folda kwaye uzibuyisele kwenye indawo ukuze uqhubeke nokuqinisekisa ukuba awuyi kuphulukana nedatha.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Indlela yokusingatha iCloud yogcino
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » iTunes » Uyiphatha njani i-iTunes backups
UJavi A. sitsho
Konke kulungile, kodwa ndingongeza enye into: xa usiya kubuyisela i-iOS okanye uyihlaziye, thatha eyona backup yamva nje kwaye uyihambise kwenye indawo kwi-HD. Amaxesha amaninzi, ngaphandle kokwazi ukuba kutheni, i-iTunes iyicimile ikopi yam yokugqibela. Ngenhlanhla ndibona kude ...
Phendula kuJavi A.
Kukho ingxaki enkulu ngokusetyenziswa kwe-IWork (amaphepha, amanani kunye ne-Keynote). Ngamaxwebhu athile kuphela abuyiselweyo (lawo akotshelwe kwi-iTunes). Ndizamile ukubuyisa ezo bezingakhutshelwanga ngokuthi "kuvulwe" ikopi yogcino nge-juicephone, kodwa iifayile ziyavela nesiphelo ".pages-tef". Ezi fayile azifundeki (nditsho nokulungisa ukuyekiswa) kuba ifayile yesalathiso ilahlekile.
Ngenxa yoko, ndaqala ukuvumelanisa amaxwebhu am kunye ne-ICloud kwaye ndinengxaki yesibini. Ngaphandle konxibelelwano kwinethiwekhi amaxwebhu awavulwa. Ngokunxibelelana nenethiwekhi kukho ukulibaziseka okukhulu kuba kuqala bahambelana nelifu.
Ngaba kuye kwenzeka okufanayo nakubo? Nasiphi na isiphakamiso?
Ewe, ndicinga ukuba inesisombululo esinzima, kuba kunjengokuba usitsho, okanye ubuncinci into efanayo iyenzeka kum. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni ndingasebenzisi ukuvumelanisa amaxwebhu kwi-iCloud, yinto yokuba iApple kufuneka iphucule kakhulu.
Nge-14/03/2013, nge-19: 55 PM, uDisqus wabhala:
-Ndidibanise i-iPhone5 ne-iTunes yeMacbook yam
-Bendifuna ukwenza ikopi yogcino lwe-iPhone kwikhompyuter, kuba i-iCloud igcwele. Ikopi yam yokugqibela endiyenzileyo yaqala ngo-Epreli walo nyaka
-Isidenge kum, endaweni yokubetha «Yenza ikopi ngoku», ndibethe «Buyisela ikopi»
-Kweneke ntoni? Ewe, i-iPhone ingathi yayihlala ngo-Epreli! I-WhatsApp inemiyalezo kude kube ngu-Epreli, iifoto zokugqibela zika-Meyi noJuni aziveli kwi-reel, ukubonakala kunye nokusetyenziswa kwayo ngaphambili ...
-Bbbbrrrrr !!! !!! Ndiphantse ndanepilisi!
-Ngaba kukho nasiphi na isisombululo sokufumana kwakhona iselfowuni njengokuba bekunjalo namhlanje ekuseni?
Ndicinga ukuba ezo foto azizange zisuswe ngomlingo… akunjalo? Ndicinga ukuba kufuneka babe kwiselfowuni yam ... kuba kwi-iTunes ndibona iyonke endinayo kude kube namhlanje ...
Ii-iTunes zisenokuba zenze ugcino lwamva nje. Zama ukubona ukuba ikhona na ukusukela namhlanje okanye kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Enkosi ngempendulo yakho Luis, kodwa ngelishwa hayi, akusekho kopi yamva nje. Ndiyicinga ukuba ayizizo iindaba ezilungileyo, akunjalo?
Ndineefoto ezili-1175 kuluhlu lweselfowuni, kwaye kwisishwankathelo se-iPhone kwi-iTunes, emazantsi, kubonakala ngathi kukho iifoto ezingama-2137. Kodwa andiziboni kule reel… Baphi? Ngaba banokufunyanwa kwakhona?
Ukuba awunayo i-backup, andazi ndlela yokuyifumana kwakhona. Uxolo.
UMonica Huerta sitsho
Ndingazijonga njani iifayile zam ezigcinwe kwifolda yogcino? kubonakala kungenanto.
Phendula uMonica Huerta
Oko akunakwenziwa ngoluhlobo kuba ngolu hlobo, udinga inkqubo ye-Wondershare uGqirha wefowuni, ethi ukuba andiphazami ayizukusebenza ne-iOS 8.3.
I-PPSSPP sele iqhuba imidlalo ye-PSP kwii-FPS ezingama-60
Isikhokelo seTV, fumana konke abakusasaza kumabonwakude